နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Bangkok Trip7နတ်မိမယ်တို့ ပျော်စံရာ (၇)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 6:29 PM
မောင် May 16, 2009 at 7:18 PM
တရုတ်မန်ကျည်းသီး (သို့) မန်ကျည်းကောက်ကွေး
ဇနိ May 16, 2009 at 7:38 PM
တရုတ်မန်ကျည်းလား တလုပ်မန်ကျည်းလားမသိ ငယ်ငယ်က ကြိုက်တယ်။ အညာမှာလည်းပေါတယ်။ ခေါက်ဆွဲဖတ်လိပ်လည်း စားချင်သား။ ကောင်းပါ့ ကောင်းပါ့
JuneOne May 16, 2009 at 8:33 PM
JuneOne May 16, 2009 at 8:38 PM
ကိုလူထွေး May 16, 2009 at 10:13 PM
took took စီးပြီးပြန်သွားပြီ
PAUK May 16, 2009 at 10:36 PM
:P May 16, 2009 at 11:05 PM
ကိုဘ.. အဝတ်လျှော်စက်က ကိုယ် အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် အချိန်မီ ပြန်လာမယူဖြစ်ရင် သူများယူထုတ်သွားလို့ ရလား..။
khin oo may May 17, 2009 at 1:25 AM
အသီးအနံဆုရတယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးပေါက်သလိုလျောက်ပြောတာ နေပါလိမ့်မယ။် ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့..
တုတ်တုတ်စီးရင်ဟိုတုံးက သုံးဘီးကားစီးတာကို သတိရတယ။် သိတ်တူတာဘဲ။ ဘွိုက်စ တို့တော့ကြားဘူးရုံဘဲ ရှိမယ်
ရွေမန်ကျည်းသီးတင်ထားတဲ့ ကျွန်းစားပွဲမျိုး တို့တွေ အိမ်မှာရှိဘူးတယ်။ အခုတော့ အစ်မအကြီးအိမ် ကိုပြောင်းသွားပြီ။ အဖေ့အမွေ ပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာတုံးက အဲသလို မန်ကျည်းသီးမမြင်ဘူးပါ။
ဆိုက်ဆို မစားဘူးပါ။ ဘယ်လိုနေမလဲမသိ.။
ခေါက်ဆွဲဖတ်ကိုလိပ်ထားတာ။ မမြင်ဘူးဘူး ရန်ကုန်သူကတော့ကော်ပြန့်လိပ်ဘဲသိပါတယ်
ရေသန့်စက် အဝတ်လျော်စက်များကို မမြင်ဘူးသောကြောင့်သေချာကြည့်သွားသည်
ပုံတွေ နဲ့ဆားချက်ရတာ မသက်သာပါဘူးဟယ်.........(ကိုယ့်ကို စောင်းပြောသည်ထင်၍ှရှင်းပြသွားသည်)
ကဗျာလေးလည်း နစ်ခါ သုံးခါ ရွတ်ကြည့်သွားတယ်။ ပေါက် ကိုပြောချင်တာကိုး......
Aung Nyein May 17, 2009 at 10:10 AM
Humvee မဟုတ်ပါ၊ ရိုးရိုးဂျစ်ကားပါဘဲ ပြင်ထားတာပါ။ Humvee ကအများကြီး ကြီးပါတယ်။
မီးမီးချစ် May 17, 2009 at 10:50 PM
ဒီလို မကျည်းသီးပင်မျိုး အိမ်နားမှာလဲရှိ ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရိုပါသည်။
ကုလားမကျည်းသီး လို့ ခေါ်တာပဲ..အပျော်တော့ စားလိုက်တာပဲ...
ဖန်တန်တန် နဲ့ သိပ်တော့မကောင်း
လူမုန်း May 20, 2009 at 1:16 AM
Wrangler Jeep ကြီးပါ...
HumVill တော့ မကြားဖူးပါ. HumVee ဆိုရင်တော့ ဒီမှာပါ 1989 ( Panama) မှာ စသုံးပါတယ်.
ထိုင်း တွေ ဝယ်စရာမလိုပါ. U.S နဲ့ စစ်ရေးပူးတွဲ လေ့ကျင့်ပီးရင် မကောင်းမကန်းလေးတွေ ထားပစ်ခဲ့ကြတယ်.နယ်စပ်ဖက်မှာ မမြင်ချင်အဆုံး အင်အားပြနေပါ၏...
“Victory Monument” ပုံတွေ အတော်များသား..အပင်ပန်းခံ အဝေးကြီးသွားပီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေအတွက် ขอบคุณยกใหญ่ ပါ.
Ko Boyz May 20, 2009 at 9:36 AM
ကျေးဇူပါဗျို့...။ အမှားပြင်ပေးတာ။ အဲဒီကွန်ဒိုနားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက ဟမ်းဗီးဆိုလို့ ကိုယ်လဲ ဗီးလိုက်တာ။ ကားဆို ဆလွန်း၊ဂျစ်လောက်သာ ကိုယ်က သိတာ။
ThaPyayNyo July 4, 2009 at 8:22 AM